10 ciyaaryahan oo qarka u saaran inay ka tagaan kooxda Barcelona xagaagaan – Gool FM
(Spain) 09 Maajo 2019. Barcelona ayaa qaab mucjiso ah kaga soo hartay xili ciyaareedkii labaad ee xiriir ah tartanka xiisaha badan ee Champions League, taasoo muujineysa inay jirto baahi loo qabo in kooxda dib u eegis lagu sameeyo, kaddib marka uu furmo suuqa xagaaga ee soo socda, waxayna arintan sababi kartaa in ciyaartoyda qaar ah ay ka tagaan.
Hadaba wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa maanta oo khamiis ah sheegay in kooxda Barcelona aysan sidaas ku aamusi doonin, kaddib markii laba xili ciyaareed xiriir ah ay qaab isku mid ah kaga hareen tartanka Champions League.
Kooxda reer Catalonia ayaa dib u fiirin doonta qorshaheeda xagaaga, waxayna ka shaqeyn doonaan sida ay ku sameyn lahaayeen heshiisyo muhiim ah.
Wargeyska ayaa aaminsan in kooxda Barcelona lagu arki doono isbadalo badan dhowrka bilood ee soo socda, iyadoo ay liis ka kooban 10 ciyaaryahan ay halis ugu jiraan in gabi ahaanba ay isaga dhaqaaqaan garoonka Cump Nou xagaagaan.
Saddex ciyaaryahan ayaa ilaa iyo haatan la xaqiijinayaa inay ka tagayaan safka kooxda Barcelona, kuwaasoo kala ah Prince Boateng, Jeison Murillo, maadaama ay soo idlaan doonto heshiiska amaahda ay ku joogeen Blaugrana, waxayna dib ugu laaban doonaan kooxahooda Sassolo iyo Valencia.
Barcelona ayaan ku fikiri doonin in heshiisyo kama dambeys ah ay ka saxiixato labadan xidig, sidoo kale Thomas Vermaelen ayaa xur noqon doona, maadaama heshiiska uu ku joogo garoonka Cump Nou uu dhacayo bisha Juun ee soo aadan.
Xidigaha kale ee qarka u saaran inay cagta ka furtaan kooxda Barcelona xagaagaan ayaa kala ah, Malcom, Cillessen, Coutinho, Umtiti, Rakitić iyo Rafael Alcántara.
“Messi wuxuu ka yimid Duni kale, Ronaldo-na weli waa kan ugu fiican adduunka” - Mario Balotelli
Liverpool oo Fariin gaaban u dirtay Tottenham ka hor kulankooda Final ka Champions League